Sunday September 20, 2020 - 16:24:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Caabuqa Covid19 ayaa wali halaag daran ka geysanaya gudaha dalka Mareykanka ee dhaca waqooyiga qaaradda America.
Tirakoobyo laga sameeyay wadanka Mareykanka ayaa muujinaya in cudurku uu kusoo laba kacleeyay illaa 23 gobol walina uu yahay mid halistiisu sarrayso.
hadda oo todobo bilood laga joogo markii uu Carona kasoo bilaawday Mareykanka ayay dhimashadu gaartay 200,000 oo ruux (Laba boqol oo kun) sida uu xaqiijiyay guddiga gaarka ah ee Mareykanka uqaabilsan xakameynta caabuqan.
Saraakiisha caafimaadka American-ka ah waxay saadaaliyeen in dhimashada Carona ee dalkooda uu gaari doono 300 oo kun, donald Trump ayaa bilaawgii carona wuxuu saadaaliyay in dhimashada uu dalkiisa ka geysan karo Covid19 ay gaari karto 200K illaa 245K waxaana muuqata in daadaashiisa ay soo dhowaatay waloow markii dambe uu ka laabtay uuna halaaga dadkiisa gaari kara kusoo koobay 80k illaa 100K.
Shalay oo kaliya waxaa Mareykanka Carona ugu dhintay dad gaaraya 983 ruux halka uu soo ritay 49,575 oo ruux, Mareykanka ayaa wali kaalinta koowaad uga jira dalalka caalami ahaan ladhiman caabuqan.
Wadanka Baraaziil ayaa kujira kaalinta labaad halka dalka Hindiya uu yahay dalka sedaxaad ee ugu dhimashada badan, illaa iyo hadda laguma guulaysan in lasoo saaro daawo talaal ah oo caabuqan lagula tacaalo.